Ter Stegen oo fariin dhiirogalin ah u diray saaxiibadiis kahor kulanka El Clásico ee Real Madrid – Gool FM
Dajiye February 28, 2020
(Barcelona) 28 Feb 2020. Goolhayaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Marc-André ter Stegen ayaa sheegay in kulanka El Clásico ee dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Real Madrid uu noqon doonto mid aad u adag.
Dhinaca kale goolhaayaha reer Germany ee Marc-André ter Stegen ayaa ugu baaqay saaxiibadiis in kulanka soo aadan ee El Clásico ay ugu diyaar garoobaan sida ugu sarreysa.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku hoggaamineysa horyaalka La Liga ee dalka Spain 55 dhibcood, halka Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta ay heysato 53 dhibcood, sidaas darteed ciyaartaan ayaa ahmiyad weyn u leh labada dhinac.
Haddaba goolhayaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Marc-André ter Stegen ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka El Clásico wuxuu ku sheegay:
“El Clásico waa kulanka ugu weyn adduunka, sidaas darteed kulligeen waan ku faraxsanahay taas, waxaana dooneynaa inaan ka qeyb galno isla markaana aan ku raaxeysano”.
“Waxaan si fiican u ognahay in dhibcuhu ay iska agdhow yihiin labada kooxood horyaalka La Liga, waxaana sidoo kale jirta saddex dhibcood oo horteenna ah oo aan dooneyno inaan ku guuleysano, waxaan rajeeneynaa in farqiga inoo dhexeeya uu sidan ahaado ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka”.
Antonio Conte oo ka hadlay halista ay leedahay in la ciyaaro taageero la’aan kulanka Derby d'Italia